Barakicintii Somalida Islii oo Soo Dhawaatay kadib Amni daro kusii Baaheysa Xaafadaasi (Warbixin)
Home Diaspora Barakicintii Somalida Islii oo Soo Dhawaatay Kadib Amni Daro kusii Baaheysa Xaafadaasi...
Magaalada Nairobi gaar ahaan Xaafada islii waxa ku dhaqan Somali Badan waxaana iminka soo wajahay cabsi ballaaran oo ku aadan bad-baadinta naftooda iyo maalkooda.
Seddex qarax oo loo maleeynayo inay ahaayeen bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa xalay fiidkii waxa lagu weeraray Baar dadka ku cabayeen Khamro iyadoona khasaaro kala duwan uu ka dhashay qaraxyadaasi.
Waxaa arintaasi dadka Somaliyeed qaarkood ku tilmaameen waa falalka amni daro ee kasoo cusboonaaday Xaafada Islii mid soo dadajineysa go’aan inay qaadato Kenya.
“Waxay ila tahay Barakicintii Somalida Islii oo soo dhawaatay kadib amni daro kusii baaheysa Xaafadaasi sidaa waxa yiri qof ganacsi ku leh islii dhabanada shantiisa farood gacantiisa midigna ku heystay”.
Kenya qudheeda ayaa loo maleynayaa inay ka dambeyso qaraxyada ka dhaca xaafada islii iyadoo loogu misabitanayo Somalida looguna bisan-bisoonayo sidii hantidooda loo dhici lahaa ama magaalada looga saari lahaa.
Todobaadkii hore dhamaadkiisa ayaa dawlada Kenya waaxdeeda la socodka qaxootiga waxay amartay hay’ada UNHCR inay uwareegto xeryaha Dhadhaab sidoo kalena amar ku bixisay dadka aan udhalan dalkeeda ee qaxootiga ah inay aadaan Dhadhaab.
Xaalada ay kusugan yihiin iminka Somalida Islii waa meeshii ugu xumeyd waayo meesha waxay ku heysteen nabad galyo iyo ganacsi hana qaaday waxaase hal bacaad lagu lisay ka dhigay dad siyaasad wato oo rabshado abuuray sida uu yiri Sh.Maxamed Cabdi Umal.
Sida qorshaha uu yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu...
SAWIRRO: Farmaajo iyo Xaaf oo dhagax dhigay dekedda Hobyo